Otu Anyị Ga-esi Sighachite Ọdịnaya | Martech Zone
Otu Anyị Si Egghachite Ọdịnaya Na-aga nke Ọma
Monday, September 28, 2015 Sọnde, Septemba 27, 2015 Douglas Karr
Akpọrọ m ka m nwee mkparịta ụka na Blab.im izu ole na ole gara aga bụ ezigbo mkparịta ụka icheghari ọdịnaya. Anyị na-ahụ ọtụtụ ụlọ ọrụ na-anọgide na-alụ ọgụ site na ịmepụta ọdịnaya - na iweghachi ọdịnaya abụghị naanị umengwụ ụzọ iji kesaa ọdịnaya, ọ bụ ụzọ dị egwu iji bulie usoro ọdịnaya gị.
Maka Martech, anyị na-ede n'etiti 5 na 15 isiokwu n'izu. Imirikiti nke ndị ahụ na-edozi ọdịnaya anyị gbakwunye na agba na nkọwa, kwa. Nke a bụ ezigbo ihe atụ - isiokwu nke Etu esi eweghachi ọdịnaya bu nke m choro ide banyere, mana infographic mepụtara ExpressWriters gbara m ume ka m dechaa post ma nye ndụmọdụ nke m.
Anyị weghachite ọdịnaya site na usoro atọ dị iche iche:
Vighaghachi Ọdịnaya - Anyị na-ahụkarị na otu okenye, nke na-agafebeghị, edemede na-aga n'ihu na-elebara blog anya ka anyị wee pụọ ma nyochaa isiokwu ahụ niile, melite onyonyo, gbalịa ịchọta vidiyo, ma weghachite isiokwu ahụ na URL yiri nke ọhụrụ . Ebe ọ bụ na isiokwu ahụ nwere ikike ọchụchọ, ọ na-echekarị na ọ ga-aka mma na engines ọchụchọ. Ma n'ihi na ekerịta isiokwu ahụ ụyọkọ, ihe ngosi ndị na-egosi na bọtịnụ anyị na-eme ka ịkekọrịta karịa. Ekwela ka ọdịnaya dị ukwuu nwụọ!
Ọkara obe - Ihe omuma ihe a na-ekwu otutu ihe nye ohere iji chee otu okwu ahu n’etiti ndi ozo. Anyị na-eme nke a, na-atụle posts anyị na Podcast ahịa anyị ma na-eme vidiyo vidiyo. Anyị na-ejikọtakwa ọnụ jiri ha maka akwụkwọ ọcha, akwụkwọ na akwụkwọ ozi site n'oge ruo n'oge.
Na-egwu egwu - Anyị mepụtara atụmatụ na-aga nke ọma na ndị ahịa anyị maka inyere ha aka iwulite ikike na ọdịnaya, ọ bụghị naanị ịmịpụta ya na-enweghị njedebe. Isiokwu ahụ malitere wee gwa anyị ka anyị chee na ya, dee akwụkwọ akụkọ na ya, ma gwupụta ala n'ime nyocha isiokwu ahụ. Mgbe ụfọdụ ị na-ede nnukwu edemede na nzaghachi bụ "meh". Ma oge ndị ọzọ ị dee edemede ọ ga - ewe! Were ohere igwu miri emi n'ime isiokwu ndi a ma ama - inwere ike imeghari ha dika ihe omuma, ihe osise, webinars na ihe ngosi.
A na-ekekọrịta ma na-ele infographic anya, ná nkezi, Oge 30 dị ukwuu karịa post blog - yabụ ị ga - ahụ etu iwere edemede gị na ịmepụta ọhụụ site na ya nwere ike ịdọpụtakwu uche na isiokwu ahụ. Ndị na-edepụta akwụkwọ na-atụ aro ịtụgharị isiokwu gị na nkwupụta, ntuziaka, ọdịnaya mgbe niile, infographics, pọdkastị na vidiyo.
Tags: mmepụta ọdịnayanyocha ọdịnayaobe obendị edemedeotúesi eweghachite ọdịnayainfographicweghachite ọdịnayaịtụtaghachi ọdịnaya
TweetReach: Ruo Ogologo Oge Ha Olee Tweet Gị Tweet?
Ihe kpatara teknụzụ ji abụ ihe dị mkpa maka ịga nke ọma n'ụlọ oriri na ọ Successụ .ụ